Nkịtị PVC na-ere ahịa maka ndị na-amị amị V-Straps Injection Manufacturer and Supplier | INPVC
Anyị bụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ na ụlọ ọrụ na -agwakọta PVC na China. A haziri ma rụpụta ogige ndị a kpọmkwem iji gboo mkpa nke oge a site n'enyemaka nke igwe ọgbara ọhụrụ dị ugbu a. Anyị na -agba mbọ hụ na anyị tozuru oke mba ụwa ma debe ogo ngwaahịa a na mpaghara ọ bụla nke mmepụta.
A na-eji ihe eji eme ihe na gburugburu ebe obibi arụpụtara akwa mkpuchi PVC anyị nke ọma ma ejiri ya mee ihe naanị maka imepụta na eriri. Ngwakọta a nwere nnukwu ọrụ n'ịhụ na ịdịte aka na ịdịte aka nke akpụkpọ ụkwụ ahụ na -enyere aka n'ichepụta ọtụtụ ngwaahịa emechara. Ngwakọta a dị na nke na -egbu maramara, akọrọ yana matt na -emecha iji nweta nlele ikpeazụ nke eriri ahụ. Ọzọkwa, enwere ike ịkpụzi ngwakọta anyị na -agbanwe agbanwe n'ụdị dị iche iche.
Agba, nha na akara dị iche iche, gụnyere Solid, Foam na Transparent dị!
Siri ike, Ụfụfụ, Uzo, Eke
Ekweghị ekwe ShoreA60-A75
Njupụta 1.18-1.25 g/cm3
Ngwa Akara akpụkpọ ụkwụ PVC, akpụkpọ ụkwụ Upper Belt V-Strap
Eriri akpụkpọ ụkwụ Thong V, eriri akpụkpọ ụkwụ ịsa ahụ,
Tụgharịa eriri, Jelly Slipper Upper Strap,
Na -adịgide adịgide. Nkasi obi. Eyi eguzogide.
Agba Ejiji Ndị Dị Mkpa, Agba Dị Ọcha
Nyere aka na ime ka matt rụchaa & nwee mmetụta nkụ
Iji mee ka naanị mgbochi mmiri na akpụkpọ akpọọ nkụ
A na -eji ngwa emepụtara n'ụlọ ọrụ anyị na akpụkpọ ụkwụ dị ka slippers, soles, components, na straps wdg. Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu iwu wee na -achọ otu n'ime ndị na -ebubata ngwaahịa na ndị na -ebubata ngwongwo PVC tụkwasịrị obi, anyị bịara ebe a iji jeere gị ozi.
Kpọọ ma ọ bụ dobe ajụjụ gị ka ịmatakwuo.
Nke gara aga: Mgbanwe Polyvinyl chloride Ihe N'ihi ịkwanyere akpụkpọ ụkwụ Ọgwụ
Osote: Ogige PVC maka mkpuchi waya na mkpuchi mkpuchi
Eco-enyi na enyi New ịkwanyere Plastic N'ihi Kids Children ...
Super Light Ọgwụ mezuwo Plastic nsogbu dị iche iche fo ...